IYunivesithi yamaKristu iAmes | Imirhumo, iScholarship, uPhononongo, uKwamkelwa ngo-2022
Novemba 27, 2021 UAdaeze Nwachukwu
I-Ames Christian University yenye yeeyunivesithi eziphezulu zamaKristu eMelika. Isikolo saboleka igama kuFisher Ames elifa lakhe igama lakhe. Uzibophezele ekuthatheni ilifa likaFisher Ames eliya phambili, elibonakala libonakaliswa kwizifundo nakwindlela yekharityhulamu yayo.
Ukutyikitya kwi-Ames Christian University kuthetha ukuba awuyi esikolweni kuphela ukuze ufumane isidanga sakho sasekholejini kodwa ubandakanyeke kwimisebenzi yobuKristu ekushiya unokhetho lokusondela kuThixo njengoko iminyaka iqhubeka.
Kukho iindidi ezahlukeneyo zeenkqubo zokuzibhalisela i-Ames Christian University; iinkqubo ukusuka kwizifundo zasimahla zediploma ukuya kwiinkqubo zesidanga esinexabiso eliphantsi.
Enye into ebaluleke kakhulu ukuba uyithathele ingqalelo ukulungelwa kwexesha kwiYunivesithi. Abafundi apha bayakwazi ukusebenza ngesantya sabo. Kulunge kakhulu ukuba abafundi basebenze ngezifundo ngesantya sabo kunye nokuzonwabisa ukuze bafumane ulwazi ngakumbi kwilizwi likaThixo.
KwiYunivesithi i-Ames Christian, abafundi bayakwazi ukufumana iindlela ezintsha zokuxabisa uThixo, ukukhonza uThixo, kunye nokwakha uhambo olunzulu kunye naye. Ikharityhulamu yeyunivesithi izama ukunika ulwazi kunye nobulumko njengoko uThixo ebonelela ngezimvo zokufunda.
IYunivesithi ibekwe eFort Myers, eFlorida. Liziko lokufunda eliqhelekileyo labafundi abangaphezu kwama-75,000 abavela kwihlabathi liphela, ukufunda okuphefumlelwe nguThixo uSomandla.
Njengeyunivesithi yamaKrestu, isikolo sikholelwa ngamandla kusindiso oluyimfuneko lweNkosi uYesu Krestu entliziyweni yemiphefumlo emininzi kunye nemfuno engxamisekileyo yokuba amadoda aphakame abe ngoonozakuzaku bakaKristu naphina apho sizifumana sikhona.
Okona kubaluleke kakhulu, i-Ames Christian University iqeqeshe aBafundi ekuhambeni kwexesha kwaye isabaqeqesha abafundi ngexesha elinje kunye nemfuno yokholo kunye nokuthembela kwamaKristu eNkosini ukuze ibonwe lihlabathi kunye nokukhanya okuqaqambileyo kweNkosi yethu noMsindisi uYesu Krestu ukuba oyise ubumnyama obugubungela izixeko ezahlukileyo namhlanje.
I-Ames Christian University yindawo yokukhula komntu elizwini nakwizenzo zempumelelo ejikeleze ubukumkani bukaThixo. Ngoku, jonga ngezantsi ulwazi malunga ne-Ames Christian University enokukunceda.
1 Ames Christian University uphononongo
2 Ukwamkelwa kweYunivesithi yamaKrestu
3 Ames iYunivesithi yamaKrestu iikhosi zasimahla
3.1 Izibonelelo zeAmes Christian University iikhosi zasimahla
3.2 Indlela yokufaka isicelo kwi-Ames Christian University iikhosi zasimahla
4 Ufikelela njani kwiAmes Bible College Student iphepha
5.1 Ngaba i-Ames Christian University yamkelwe?
Ames Christian University uphononongo
Kukho ubungqina obuninzi kwiAmes Christian University. Zininzi izinto ezilungileyo esele zitshilo malunga neDyunivesithi ezivela kubaphumeleleyo, abaphengululi, kunye nabakhenkethi kunye nemizekelo embalwa engezantsi ezokukunceda wenze isigqibo ngohlobo lwesikolo iAmes Christian University ebonwa ukuba yiyo. Funda apha ngezantsi:
'' Ndisandula ukugqiba imigaqo yoLawulo lweBhayibhile kwaye ndinokuqala ukuva ukubizelwa nguMoya oyiNgcwele enkonzweni. Ndingathanda ukudumisa iNkosi kwaye ndibulele iAmes Bible College ngokundinceda ndifumane indlela yam kwakhona. Enkosi." Umfundi we-AD ovela eTaiwan
Ndisebenza kwi-Battle for the Body kwaye wow yintoni ingcinga. Ndibe ngumfundisi iminyaka esithoba kwaye khange ndikrwele umphezulu wolwazi lonke. Ndifumana ubulumko bukhulu kwaye ndiyayithanda into endiyibonayo. Izifundo zinzima. "
'' Ndichithe ixesha elininzi emini ndifunda "iSiseko seSaveyi yeBhayibhile enye" ​​kwaye ibonakala intle! Ngaphambili ndithathe ikhosi yovavanyo lwetestamente endala kwaye ikhosi yakho ibanzi ”Student F. M waseNorway.
“Ndizonwabela kakhulu izifundo zam. Enkosi ngokundivumela ndifunde ilizwi likaThixo kunye neKholeji yakho yeBhayibhile… Ndizithengele isichazi magama esipheleleyo samagama ebhayibhile eStrong ukuze andincede kulangazelelo lwam… wanga uThixo angakusikelela nemisebenzi yakho emihle. Enkosi kwakhona ”Umfundi uJB ovela eNorth Carolina
Ukwamkelwa kweYunivesithi yamaKrestu
Malunga nokuvunywa ngokusemthethweni kwiYunivesithi yama-Ames yobuKrestu, isikolo siqinisekisiwe liBhunga leziFundo ngoxanduva lokuphendula kwezemfundo elinguarhente engekho phantsi korhulumente eyilelwe ngokukodwa injongo yokukhuthaza ukuthembeka kwiikholeji zamaKristu nakwiiyunivesithi zaseMelika.
IBhunga leMfundo lokuphendula ngezemfundo elibizwa ngokuba yi-ACEA liqumrhu lootitshala abangamaKristu kunye nezikolo zoqeqesho lobuKristu kunye neenkqubo ezikhoyo zokubonelela ngentembeko ngokunxulumana phakathi komnye nomnye.
I-ACEA inoxanduva lokubonelela ngoxanduva lokuphendula kunye nokuvavanya ngaphandle kokuphazamisa nawuphi na umbono wesikolo, imishini kunye nobizo.
Nangona kunjalo, ukucaciselwa ngakumbi kunye nokuzonwabisa, ukuqinisekiswa kweeyunivesithi kunye neeminari eUnited States yinkqubo yokuzithandela kunye nokuvunywa okunikezelwa ziiarhente zabucala nezingezizo ezaseburhulumenteni kwaye iiarhente zikarhulumente aziboneleli ngokwamkelwa kwezobufundisi okanye kwisebe kwaye akukho nto malunga nokuvunywa kukarhulumente okanye kukarhulumente. Iziko lenkolo lakha laviwa kuba urhulumente woluntu akanalo igunya lokulawula iimfundiso zonqulo okanye ukuba yeyiphi iidigri zonqulo ekugqityweni kwemfundo ngaloo ndlela inokukhutshwa.
Ke ngokusisiseko, i-Ames Christian University ayinayo imvume yokuvunywa yommandla, ke kwabo bafuna imisebenzi kwiindawo ezinje ngezikolo, abacebisi abanelayisensi kurhulumente, kunye nawo nawuphi na omnye umsebenzi onokubakho, kuya kufuneka ucinge ukuba idigri kwi-Ames Christian University injalo ufuna.
Ames iYunivesithi yamaKrestu iikhosi zasimahla
Njengeyunivesithi yamaKristu, iYunivesithi i-Ames Christian izinikele ekuncedeni abafundi ukuba bafumane iinyawo zabo kwindawo abayifunayo.
Kodwa ke, njengesiphumo sokungakwazi ukumelana nemali kwicala labantu abaninzi, i-Ames Christian University yenze ukuba kufumaneke iikhosi zasimahla zabafundi abangakwaziyo ukufikelela kwezinye zezifundo abanqwenela ukuzenza okanye mhlawumbi nawuphina umntu Inzala ekuthatheni le khosi (ayithethi ukuba abo bangenamali).
Izibonelelo zeAmes Christian University iikhosi zasimahla
Uya kuba nokufikelela kuzo zonke iikhosi mahala
Isidanga ngaphandle kokuhlawula nayiphi na imali
Fumana isatifikethi sokugqitywa ngokupheleleyo simahla
Tshintshela ukufumana isidanga eyunivesithi nanini na.
Iikhosi zasimahla zeAmes Christian University zibonelela ngendlela ebanzi yokuba abafundi babe nenkqubela phambili emva kokuphela kwemodyuli nganye. Kukho iikhosi zasimahla zeBhayibhile ezifumanekayo kwiAmes Christian University. Ezinye zazo zibandakanya: Ungalufumana njani uthando lukaThixo, izifundo ezisisiseko zeBhayibhile, kunye nezinye ezininzi.
Nje ukuba ugqibezele inkqubo yasimahla, uya kuthunyelwa nge-imeyile iSatifikethi sokuGqibela sePDF ngegama lakho kunye nomhla ophumelele ngawo. Nangona kunjalo, awuyi kufumana Idiploma ebhaliweyo, AKUKHO kubhalwa, kwaye AKUKHO zikholeji zekholeji.
Indlela yokufaka isicelo kwi-Ames Christian University iikhosi zasimahla
Ukufaka isicelo iAmes Christian University iikhosi zasimahla;
Tyelela i-https: //aisom.org/
Jonga 'kwinkqubo yasimahla'
Gcwalisa iinkcukacha zakho ngokuchanekileyo
Khetha 'Simahla (engagunyaziswanga)' phantsi kweeNkqubo
Gcwalisa "ukusuka https://studyabroadnations.com/" kwisithuba "Uve njani malunga neAmes?"
Okokugqibela, Cofa kwiqhosha lobhaliso apha ngezantsi kule fomu.
Nawe unako Cofa apha ukuqala ukubhalisa kwangoko.
Ufikelela njani kwiAmes Bible College Student iphepha
Iphepha lomfundi wekholeji yebhayibhile ye-Ames iyafumaneka kwi-Intanethi kwaye iya kukunika lonke uncedo oludingayo. Ikhonkco liya kuba kanye ngezantsi komyalelo omfutshane kodwa okwangoku, jonga ngokukuko ukuze ufumane ukuqonda okuncinci ngaphambi kokungena ngakumbi kulwazi olongezelelweyo ngekhonkco.
Kuyaphawuleka ukuba uyazi ukuba awungekhe uthweswe isidanga ngaphambi konyaka omnye ukusuka kumhla wakho wokuqala ke qiniseka ukuthatha amanyathelo okhuseleko ngokuchanekileyo kwizifundo zakho kwaye ungangxami kwizifundo zakho. Unokuthatha nje iikhosi ezimbini ngenyanga.
Enye into ekufuneka uyazi kukuba kufuneka ubhalise kule nkqubo ukuze yonke into icwangciselwe wena ngokugqibeleleyo kunye nokwenza ukuba isatifikethi sakho senzelwe wena ukugqiba.
Kuya kufuneka ulandele yonke imiyalelo njengoko oku kuluncedo kwimpumelelo yakho kwezemfundo.
Xa uvula ikhonkco elingezantsi, cofa kwiqhosha leziko lokukhuphela ngasekhohlo ukuya kwiziko lokukhuphela kwaye emva koko ukhuphele ikhosi yakho yokuqala ebizwa ngokuba "ziZiseko zokholo". Kukho ezinye iikhosi zokuqala kwaye ukhululekile ukuba ukhethe nabani na omfunayo.
Emva koko, funda isahluko sokuqala kwaye wenze isahluko Ukuzivavanya
IBhunga leMfundo lokuphendula ngoxanduva kwezemfundo: Yiya ekupheleni kwencwadi yezifundo ukuya kuthi ga kuvavanyo ngalunye lwakho
Cofa kwiphepha leziko lokubhalela uze uye kulo uze uprinte iphepha loviwo
Phrinta kwaye uthathe uvavanyo lokugqibela
Phrinta isitshixo sempendulo kwaye ube neqabane lakho okanye ibakala eliyimfihlo
Emva koko ngenisa iziphumo zebakala lakho usebenzisa ifom yokungenisa ibakala ngasekhohlo.
Ikhonkco yile Apha
Ngaba i-Ames Christian University yamkelwe?
Ngandlel 'ithile, ewe! Lo mbuzo awunayo impendulo ethe ngqo kuba e-US akukho mthetho uchasene neesemina ezivunyiweyo ngokusebenzisa umzimba wabo wobuKristu kulapho i-Ames Christian University iwela khona. I-Ames Christian University yamkelwe ngequmrhu le-ACEA eliliBhunga lezeMfundo kwezemfundo ukuphendula ngezikolo zamaKristu.
Iinyani zesayensi ebhayibhileni ongazange wazazi!
Imibuzo engama-75 ngoThixo nangeBhayibhile engenakuphendulwa
Izifundo ezingama-25 eziSimahla eziPrintwayo zeziFundo zeBhayibhile ezinemibuzo kunye neempendulo PDF
Iikholeji ze-13 zasimahla zaseKholeji zaseHillsdale
Post Previous:Izifundo zasimahla zaseyunivesithi ezingama-38 ezineZatifikethi
Okulandelayo Post:Iinkqubo ze-13 zeMasters eziBalaseleyo eCanada kwimisebenzi